Archive du 20200217
Air Madagascar Hisolo toerana ny Air Austral ny Groupe Rajabali ?
Manomana ny fialany madiodio amin’ny fiaraha-miombon’antoka ara-stratejika amin’ny kaompania Air Madagascar ny kaompania
Sefo fokontany Mba tsy ho fitaovana politika intsony…
Araka ny lalàna mifehy ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana dia telo volana aorian`ny fandraisan`ny ben`ny tanàna ny andraikiny ka tokony hiroso amin`ny fanendrena ny sefom-pokontany izy atsy ho atsy.
Filankevitry ny fampihavanana Malagasy Miisa 4 no nahazo famotsoran-keloka tamin’ny 2019
Araka ny lalàna lah. 2016-037 tamin`ny 02 febroary 2017 dia anisan` ny fahefana omena ho an`ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (CFM) ny famotsoran-keloka.
Hentitra ny Printsy Dr Ndriana Rabarioelina Hajao ny soatoavina amin’ny fikitihana ny Rova
Namoaka fanambarana ny Prince Dr Ndriana Rabarioelina, avy amin'ny lahimatoan'Imerina, Lehiben'ny fianakaviamben'ny Andriana Merina sady lehiben'ny fiombonamben'ny Ampanjaka eto Madagasikara ny sabotsy 15 febroary teo.
Antananarivo Mihamafy indray ny delestazy
Tapaka jiro tamina faritra marobe teto Antananarivo Renivohitra ny sabotsy alina ary mbola nitohy omaly: Analakely, Ambondrona, Ambohijatovo,
Ady amin'ny Kolikoly Ho feno manam-pahefana ny fonja...
Mihazakazaka ny fenenjehana ireo heverina ho nanao kolikoly avo lenta teto amin’ny firenena.
Ambilanibe -Anosibe Tratra ilay mpangala-jaza, tsy avotra ny ain’ílay zaza
Nisavoritaka ny tetsy Ambilanibe akaikin’Anosibe omaly noho ny resaka hala-jaza.
Tenisy U18 Tompondakan’i Afrika i Madagasikara
Voahosotra ho tompondakan’i Afrika ho an’ny isan-tarika i Madagasikara tamin’ny alalan’i Toky Ranaivo sy Sampras Rakotondrainibe.
Volley-ball - Championnat des Clubs de la Cavb Zône 7 Tsy tontosa noho ny delestazy ny lanonam-panokafana
Tsy tontosa noho ny delestazy naharitra ora 1sy fahefany latsaka kely ny lanonam-panokafana ny andiany faha-26 amin’ny Volley-Ball fiadiana ny “Championnat des Clubs de la Cavb Zône 7”.
Orange Pro-League Malagasy Lalao 2 no tsy tontosa hatramin’ny farany
Lalao 2 be izao no tsy tontosa hatramin’ny farany tamin’ny andro faha-12 ho an’ny fifaninanana baolina kitra Orange Pro-League
Ny teny toy ny salaka
Raikitra ny fampahatsiahivana ny fanambin’ny filoham-pirenena nataon’ny depiote iray tany Ambatondrazaka. Nofatoran’io olom-boafidy io tamin’ny teniny ny filoha Rajoelina tamin’ny fampanantenana nataony.
CORONAVIRUS Olona 85 arahi-maso any an-tokantranony
Tsy mikely soroka ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka amin’ny ady hatao amin’ny fidiran’ny otrikaretina Coronavirus eto amintsika.
Krizy ara-bola any Venezoela Lany tamingana ny Bolivar, manjaka tokana ny Dolara
Anaty krizy ara-toekarena tsy manampaharoa noho ny olana ara-politika i Venezuela amin’izao fotoana, ankehitriny dia mahatratra hatramin’ny 3.000% ny fisondrotam-bidim-piainana any an-toerana.
Famonoana an’i Estellah kely Telo ireo olona nampidirina am-ponja hatreto
Telo hatreto ireo olona nampidirina am-ponja eny Antanimora vokatr’ilay raharaha famonoana zazavavy kely iray vao efa-taona
Kaominina Talatamaty Mety hisy ny fanaovana “audit”
Mbola ao anatin’ny fandaminana tanteraka ny kaominina Talatamaty ankehitriny.
Polisim-pirenena Hiditra any anelakela-trano hiaro ny vahoaka
Maika ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Ho an’ny polisim-pirenena manokana dia nahitany paikady vaovao izany ka
Ambatondrazaka Midangana ny vidim-piainana
Miaina anaty fahasahiranana tanteraka ireo mponina any amin’ny distrikan’Ambatondrazaka, taorian’ilay ranon’ora-mikija nitranga tany an-toerana ka nanapaka ny famatsiana avy eto an-drenivohitra.
Taribin’ny Jirama nilatsaka Olona roa indray matin’ny herinaratra
Zandary iray nitondra moto avy namita iraka tany avaratry ny distrika Ambatondrazaka,
Ambohibao Antehiroka Laharam-pahamehana ny fanadiovana ny tanàna
Maika ny asa fampandrosoana ho an’ny kaominina Ambohibao Antehiroka, distrikan’Ambohidratrimo.
Voka-dratsin’ny Coronavirus amin’ny toekarena malagasy Azo sorohana, hoy ny mpahay toekarena
Ny fifamezivezen’ny olona sy ny entana maneran-tany mihitsy dia voafetra satria samy mametraka ny paikady anatiny sy ivelany ny firenen-drehetra mba hahafahana mampihena sy manafoana ny valan’aretina Coronavirus,
Fanofanana ny mpianatry ny sekoly teknika Hohatsaraina, hoy ny minisitra
Tanora afaka mamorona asa ho fanatsarany ny hoaviny sy hampandrosoany ny fireneny no hapetraka manomboka izao, hoy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena sy fampiofanana teknika, Rijasoa Josoa Andriamanana.
Fizahan-tany any Azia atsimo atsinanana Amina miliara euro ny fatiantoka noho ny Coronavirus
Misy akony ratsy amin’ny sehatry ny fizahan-tany any Azia atsimo atsinanana nyf isianílay valan’aretina Coronavirus.
Tovolahy kely tratra nangalatra atody Nisy sahy nanaboridana imasom-bahoaka
Maro no tafintohina nanoloana ny fihetsika nataona mponina sasantsasany teny Mahamasina izay sahy nanaboridana tovolahy kely imasom-bahoaka voalaza ho nangalatra atody.
Alaotra Mangoro Ankohonana miisa 4.500 nahazo tosika fanampiana
Taorian’ny orambe naha tondra-drano ny faritra Alaotra Mangoro ny volana janoary lasa teo dia niroso avy hatrany tamin’ny asa fanarenana ny FID (Fonds d’Intervention pour le Développement)